ट्रम्पले तुरुन्त राजीनामा नदिय यस्तो कडा कार्य गर्न निर्देशन ! - Babal Khabar
ट्रम्पले तुरुन्त राजीनामा नदिय यस्तो कडा कार्य गर्न निर्देशन !
January 9, 2021 by बबाल खबर
। सभामुख नान्सी पेलोसीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रा जिनामा नदिए संसदबाट महाअ’भियोग लगाएर हटाइने बताएकी छिन्।
पेलोसीले सञ्चारकर्मी हरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले तुरुन्त रा जिनामा नदिए महा भि’योग प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताएकी
छिन्। साथै उनले भनेकी छिन्, ‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाँडै राजिनामा दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ।’
उत्तर कोरियाली नेता किमद्धारा अमेरिकालाई स’त्रुतापूर्ण नीतिको अ’न्त्य गर्न आग्रह
२५ पुस : उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनले अमेरिकालाई आफ्नो देशप्रतिको सत्रु तापूर्ण नीतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उत्तर कोरि’याको सर’कारी समाचार समिति, केसिए’नएले शनिबार सो समाचार दिएको छ । उक्त समाचार समितिका अनुसार उत्तर
कोरियाली नेता अनले अमेरिकालाई आफ्ना देशका विरु द्ध अमेरिकाले पहिलेदेखि नै सत्रु तापूर्ण नीति लिएकोले त्यसको अन्त्यका लागि
नेता अनले बताउनुभएको हो ।
उत्तर कोरियाली सत्ता रुढ पार्टीको आठौं काँग्रेस बैठकमा नेता अनले सो कुरामा जोड दिनुभएको शनिबार सो समाचार समितिलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन् । उहाँले अमेरिकाले उत्तर को’रियासँगको सत्रुता पूर्ण नी तिको अ न्त्य गरेपछि मात्र उत्तर कोरिया र अमेरिका बीचको सम्बन्ध आगामी दिनहरुमा सहज हुने बताउनुभएको हो ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचन हारेर जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित हुनुभएको छ । तर पनि अहिले सम्म उत्तर कोरियाली नेताले भने अमेरिकी निर्वाचन र त्यसपछिको नेतृत्वका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको थिएन ।
उत्तर कोरियाली नेता किमले यही जनवरी २० मा अमेरिकाको राष्ट्रतिमा जो बाइडेन नियुक्त हुन लागेको केही दिनमात्र अघि शनिबार
यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले दक्षिण कोरियाका बारेमा पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नो
देशप्रतिको विगतको जस्तो स’त्रुतापूर्ण सम्बन्धको नीति नलिने हो भने दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध पनि तीन वर्षअघिको जस्तै
अवस्थामा पुग्ने बताउनुभएको थियो ।
उत्तर कोरि’याली नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच तीन वर्षअघि उच्चस्तरीय वार्ता पनि भएको थियो । त्यस वार्ताको समन्वय दक्षिण कोरियाले गरेको थियो । त्यसैले गएका कैयौँ दशकपछि पछिल्लो पटक करिब तीन वर्ष अघि भने उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको सम्बन्धमा सुधार आएको थियोे । बिगुल न्युजबाट साभार
Prevश्रीमती र १२ वर्षीय छोरा हुँदा हुँदै दोस्रो विवाह गरेपछी भयो यस्तो
nextआज बिहानै करेन्ट लागेर भाले हात्तीको मृ’त्यु